Bollards konkôlily → Fametrahana • Fiorenana • Ultratense Concrete®
Archité kely mahiava kely zavatra maritrano mifangaro ao Sehatra Urban na mipetraka amin'ny fananana manokana ary manome toetra manokana amin'ny toerana iray. Lahatsoratra miavaka, maoderina dabilio, heva, latabatra, flowerpots miaraka amin'ny voninkazo, Bins litter, mitsangana bisikileta, ny firakotra hazo sy ny kianja filalaovana ny fampiroboroboana ny habaka ary mampiavaka azy, tsara tarehy ary miasa.
Ny singa toy izany dia rindrina vita amin'ny mivaingana napetraka amin'ny toerana an-tanandehibe ary manelingelina ny boribory mihetsika ao amin'ny faritra iray. Haingon-trano izy ireo ary miaraka amin'izay koa, manana anjara asa lehibe, hisorohana ny fiara fitaterana any amin'ny toerana tsy mendrika.
Ny karazana famolavolana mamela ny fisafidianana lahatsoratra mivaingana izay mifanentana tsara amin'ny efitrano an-drenivohitra.
Ny lahatsoratra fahita indrindra dia vita amin'ny hazo, vy sy beton.
Ny tsangambato mivaingana, tsy toa ny hazo vita amin'ny hazo, dia vita amin'ny fitaovana mateza tsy mety lo ary tsy mahatohitra ny fanafihana bibikely..
Ireo lahatsoratra mivaingana dia matanjaka sy mateza.
Izy ireo matetika dia ampiasaina amin'ny toeram-pambolena, zaridaina an-trano ary tokontany, ary koa amin'ny toerana an-tanàn-dehibe, ohatra bollards fitaterana na fencing.
Ny tsangambato mivaingana dia singa tsy azo sarahina amin'ny maritrano kely ihany, tsy eo amin'ny sehatry ny besinimaro ihany, fa amin'ny fananana manokana ihany koa.
Ny fefy iray dia lazaina fa manao tsara ny asany rehefa mandeha tsara lahatsoratra amin'ny fefyizay mahatonga azy ireo. Ny fitaovana hivoahana azy ireo dia ahafahanao mamaritra ny heriny sy ny fampiharana azy. Ny tsangambato azo amboarina vita amin'ny hazo, vy, betonika na vy vita amin'ny galvanized.
Samy hafa ny vidiny, ny faharetana, ny fanamorana ny fametrahana sy ny aesthetics.
Na dia ny sakana Concrete izy ireo dia tena mateza, ny tsy fatiantoka dia ny famoronana ary ny fanoratana matetika. Raha miangona ao anaty sakamalaho ny rano, dia mety handraraka amin'ny ririnina izany ary mahatonga ny ampahany amin'ny lahatsoratra.
Ny olona sasany dia aleony mampiasa lahatsoratra vita amin'ny fitaovana hafa, ao anatin'izany: vy vita amin'ny vy, vy na hazo.
Lahatsoratra miavaka lafo kokoa izy ireo noho ny hazo vita amin'ny hazo, fa tsy mitaky fikojakojana isan-taona sy ny impregnation.
Ny midina dia ny hoe mediocre lahatsoratra mivaingana mitentina 40 kg eo ho eo izy io, izay mampitombo ny vidin'ny fivoriambe, na eo an-danin'izany, ny lahatsoratra mivaingana dia manome fanohanana mafy tokoa.
Ny bollon konkretera dia azo vidina ao amin'ny fivarotana fanatsarana ny trano na mivantana avy amin'ny mpanamboatra, izay amin'ny ankapobeny dia manolotra vokatra miaraka amin'ny matevina lehibe sy ny famolavolana mahazatra.
Lahatsoratra miavaka Famolavolana tanàna
Ny bollards vita amin'ny City Form Design dia miavaka amin'ny endrika maoderina, ary ny kalitao avo lenta amin'ireo vokatra ireo dia azo antoka amin'ny fizahana matetika ny fitaovana sy ny fizotran'ny teknolojia.
Ny asantsika dia miasa amin'ny tsara indrindra studio maritrano ary mpanaingo, izay miantoka ny fomba tsara indrindra sy ny fampandehanana ireo singa amin'ny endrika maritrano izay novokariny.
City Design no solontenan'ny orinasa italiana Metalco sy Bellitalia any Poland.
Metalco dia manolotra karazan-javamaniry kely sy ny maritrano maritrano, vita amin'ny vy sy hazo.
Ny tolotra dia ahitana elem-paritany an-tanàn-dehibe, i.e. zaridaina, arabe, zaridaina ary fiantsonana.
Ny Metalco dia mamorona dabilio, harona teny an-dalambe, lahatsoratra, tabilao fampahafantarana, hazo manarona, vilany voninkazo, haromotana bisikileta ary karazan-javaboary an-dalambe, ohatra, ny tanàna fonenan'ny tanàna.
Bellitalia dia iray amin'ireo orinasa manangana orinasa kongonina, vita marbra ary mitambatra vato voajanaharyizay ampiasaina hamoronana singa amin'ny fanaka an-dalambe.
Niorina tamin'ny taona 60 tany Italia ny orinasa ary mbola manavaka ny vokatra avo lenta, fanavaozana ary famolavolana maoderina.
BELLITALIA Srl dia mamorona singa amin'ny firafitry ny tanàn-dehibe kely. Misy dapa vita amin'ny mombamomba, famafazan-dàlana, vongam-bolo sy vilany, loharano, poste mametra ny fifamoivoizana amin'ny toeram-pivoarana sy kianja filalaovana, ary koa ny beton-tsampy, ny vato na ny fakan-tahaka ny fako kely vita amin'ny vato, azo zahana manerana izao tontolo izao.
Miteraka sy mivarotra entana an-jatony sy kanto an-jatony ny Bellitalia, mifanaraka amin'ny sehatra an-tanàn-dehibe rehetra.
Ho fanatsarana ny famoriam-bola dia nisy akora vaovao namboarina ho an'ny tetikasa nipoitra: vy vy, ny vy ary ny hazo amin'ny fomba toa mifanentana amin'ny mivaingana sy mamorona fomba vaovao vaovao.
Ao amin'ny famokarana azy dia mampiasa koa ny vato sarobidy sy ny marbra marbra noho ny loko manankarena sy ny endrika mampiavaka azy ny BELLITALIA®.
Mpanampy amin'ny famokarana sy fivarotana fanaka an-dalambe i Bellitalia ankehitriny. Izy io dia mampiasa fitaovana toy ny karazany mivaingana isan-karazany (HPC, UHPC), namerina ny vato marbra voajanahary, fambolena granita, rindrina vita amin'ny mamirapiratra, hazo ary vy.
Ny fitaovana ho an'ny famokarana kongonina izay ampiasain'ny BELLITALIA® dia avy amin'ny Dolomites manodidina. Izany dia mamela ny fanjifana solika ambany sy famoahana CO2 ambany ho an'ny fitaterana azy ireo.
Ny fitaovana avy amin'ny angovo italiana dia averina ary ampiasaina hamokarana vato sarobidy.
Miorina vita amin'ny kongsionina amin'ity fomba ity dia akora milamina sy matevina ary azo averina, ka tsy voafetra ny isan'ny fampiasa indray.
Tamin'ny taona 2015, BELLITALIA® dia namolavola fomba fiasa vaovao Ultratense Concrete®.
Vaovao dia fitaovana ahafahanao mamorona zavatra manavao sy mahaliana ampiasaina amin'ny sehatra an-tanàn-dehibe.
Ultratense Concrete® dia marika voasoratra anarana ao amin'ny Bellitalia irery. Namboarina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpahay siansa avy amin'ny Faculty of Matter, Environmental and Urban Engineering Faculty of the University of Marche (SIMAU) ary studio-endrika malaza eto an-tany.
Ny fitaovana mivaingana vita amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao farany Ultratense Concrete® dia plastika fatratra ary noho ny fananany dia azo alefa amina lasitra ihany koa izy.
UTC® dia fitaovana manana fananana mekanika tena tsara, izay ahafahan'ny famokarana vokatra misy takelaka somary manify sy rihana telo miendrika.
5 / 5 ( 28 vato )
lahatsoratra mivainganalahatsoratra fototra mivainganalahatsoratra amin'ny fefy mivainganamamolavola ho an'ny lahatsoratra mivainganafefy, lahatsoratra mivainganapatantylahatsoratra mivainganalahatsoratra mivaingana castoramavidin'ny birao betonikalisitry ny vidin'ny kongkonalahatsoratra mivaingana ho an'ny fefylahatsoratra mivaingana ho an'ny fananganana tontonanalahatsoratra mivaingana ho an'ny rantsankazolahatsoratra mivaingana ho an'ny lambalahatsoratra mivaingana ho an'ny harato alalahatsoratra amin'ny fefy mivainganalahatsoratra vita amin'ny haingon-tranobollards fiantsonana tsanganalahatsoratra mivaingana eo ambanin'ny terracelahatsoratra mivaingana eo ambanin'ny vidin'ny terraceny refy lahatsoratra mivainganalahatsoratra amin'ny fefylahatsoratra amin'ny fefy mivainganalahatsoratra vita amin'ny manda mivaingana castoramabollards fitateranabollards fiantsonana tsanganaConcrete Ultratense
Ny kianja filalaovana maoderina mamela ny fahafinaretana tsy azo ihodivirana sy azo antoka eny an-kalamanjana tsy ho an'ny ankizy amin'ny taona rehetra, fa an'ny tanora ihany koa. ...